Ngenkathi bevame ukuthanda inhlanzi, izibungu, ama-molluscs, amaqanda nezinyoni ezincane, iCape Gulls (I-Larus Vetula) nazo zingadla imfuyo encane, njengezimvu namathole. I-Cape Gull ijwayele ukunamathela ezindaweni ezisogwini futhi ibe nezindawo ezimnyama ezingaphansi kwamhlophe, izinhloko, izinsizi nemisindo. Phezulu kwamaphiko, abe nezindawo ezimhlophe esiqongweni sezinto zokuqala, kuyilapho ama-underparts amhlophe ngamnyama eduze nemikhawulo. Abantu abadala banamehlo amnyama nendawo ebomvu ephusheni lezimali zabo eziphuzi, okusho ngokwesazi seNetherlands u-Niko Tinbergen, izinkukhu peck lapho zifuna ukudla.
Izinyoni ezindala zingaba namaphiko we-128 cm kuya ku-142 cm futhi zilinganisa u-0,6 cm kuya ku-1,3 kg. Izinkumbi zaseCape ziyizinyoni ezihlala phansi ezihlala ezindaweni eziningi ezisogwini. Ngaphandle kwendawo yase-Greater Cape Town, ahlale engaphezu kwamakhilomitha ambalwa ngaphakathi. Izinyoni ezineminyaka engaphezu kwengu-24 zilotshiwe kanye nezinyoni eziye zahamba ngaphezu kuka-1 211 km ezikhungweni zazo zokuhlala, nakuba zivame ukubuyela emakoloni azo.
Isibonelo Bavame ukuhlangana ndawonye ezindaweni zokudla ezithandwayo, kodwa futhi baye baziwa ngokuhlasela izilwane eziyingozi, ngokuvamile bezobona amehlo ezilwane zabo kuqala. Iphethini labo lokudla lifana nelinye lamaqhubu, lapho isidumbu esihlaselwe kuvame ukuvuleka amehlo, umlomo, umbilicus noma i-anus.
Ama-seagull ayizinhlobo ezivikelwe, ngakho abalimi badinga imvume yokuyilawula. Ukuvimbela ukulimala, kunengqondo ukunciphisa ukutholakala kwemithombo yokudla yokufakelwa, ngokusebenzisa ukuphathwa kwemfucuza engcono. Amathini amathangi kufanele avikeleke, abaphakeli bezinyoni kufanele basuswe futhi izilwane zokudla ezifuywayo kufanele zihanjiswe ngaphakathi.
Izivimbela zomsindo nezithombe ezibonakalayo, njengezibonakaliso noma izinsalela, zingasetshenziselwa ukwesabisa izinyoni ezifuywayo emfuyweni engcupheni kanti izinyathelo zingathathwa ukuze zivikele imfuyo lapho zisengozini enkulu. Ngokwesibonelo, izimvukazi ezikhulelwe kufanele zihanjiswe emakamu amancane, lapho kulula khona umalusi ukuba aziqaphele, amasonto ambalwa ngaphambi kokugubha izimvu futhi kufanele ahlale lapho amasonto ambalwa ngemva kokugaya izimvu, kuze kube yilapho bona kanye namawundlu abo besengozini enkulu. Ukuze uthole olunye ulwazi xhumana ne-Predation Management Forum Secretariat.